China Uhla oluphelele lwama-crankshafts ezithuthi i-Crankshaft ifektri kanye nabaphakeli | USAMUWELI
Imboni yethu inomlando weminyaka engaphezu kwengu-30, ngemishini yokucubungula esezingeni eliphakeme, izindlela zokuhlola zesayensi kanye nabasebenzi abasezingeni eliphakeme. Le nkampani inegama elihle e-Guangdong, e-Xijiang, e-Jiangsu nakwezinye izindawo. Sinohlelo oluphelele lwangemva kokuthengisa futhi sinikeza ngezinsizakalo ezisheshayo nezinakekelayo.
Sikhiqiza uhla oluphelele lwama-crankshafts avela ePerkins, Renault, Toyota, Volkswagen, Beijing Hyundai, Isuzu, njll. Inkampani iyaqhubeka nokwenza imikhiqizo emisha ukuhlangabezana nezidingo ezahlukahlukene zamakhasimende. Uyemukelwa ukubuza futhi uvakashele imboni ukuthola isiqondiso.
Iminyaka engamashumi amathathu yobuchwepheshe bokukhiqiza i-crankshaft yobuchwepheshe nesipiliyoni, ukuphathwa kwesayensi nokuqina, isiqinisekiso sekhwalithi ephelele kanye nensizakalo esezingeni eliphakeme emva kokuthengisa iyisisekelo sokuwina ukwethenjwa kwamakhasimende.
Le nkampani yamukela ngobuqotho abangane abasha nabadala namakhasimende ekhaya nakwamanye amazwe ukuthi eze ukuzobambisana ngokubambisana kwezomnotho, ezobuchwepheshe kanye nezohwebo.
Okwenziwe kwenziwa ngensimbi ephezulu ye-nodular cast futhi iphathwa ngobuchwepheshe obuqinisa indawo ukwenza ngcono ukukhathala kwe-crankshaft.Ifanele izimoto, imikhumbi, izimoto zobunjiniyela, imishini yezolimo, i-generator ebekiwe, ikhwalithi yangempela, enokubukeka okuhle, ukuminyana okuphezulu, ubushelelezi, ukukhanya nokuqina ngemuva kokuqeda. Umkhiqizo ngamunye uhlolwe ngokuqinile futhi ikhwalithi yawo iqinisekisiwe. Ukupakisha ibhokisi kunokubukeka okuhle nomjikelezo wokukhiqiza oqinile: izinsuku zokusebenza ezingama-20-30, ukupakisha okungathathi hlangothi / ukupakisha kwasekuqaleni, indlela yokuhamba: umhlaba, ulwandle nomoya.
imodeli 3E 5E
amandla eqine 700-2 （mPa）
Ukunwebeka 2 （%）
Izinhlobo zemoto ezisebenzayo IToyota
Ubukhulu bephakheji 50X16X16
Impact amandla 230 （J / c㎡）
Ukuncipha kwesigaba 33 （﹪）
Ixhuma usayizi wembobo yenduku 43
Isikhungo sebanga lenduku yokuxhuma 43.5 （mm）
Langaphambilini I-Camshaft ephezulu
Olandelayo: Ikhwalithi ephezulu yemoto iFlywheel
I-Engine Casting Crankshaft yePerkins135 nge ...
I-crankshaft yemoto eqinile ye-Isuzu4BD1